Voasazy handoa onitra ilay mpikarakara fihetsiketsehana sarintany antserasera ao Rosia noho ny fanehoan-kevitra mamoa-fadin’ny mpandray anjara · Global Voices teny Malagasy
Zava-baovao fa malaza any Rosia ny famoriam-bahoaka virtoaly
Voadika ny 05 Jolay 2021 4:00 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Español, Português, русский, English
Pikantsary amin'ny Yandex.Maps famoriam-bahoaka an'aterineto (cyber-rally) nokarakarain'i Aleksandr Rimov tany Moskoa sy St Petersburg. Maneho ireo hafatry ny mpandray anjara ny kisary fanehoan-kevitra ao amin'ny sarintany. Sary avy amin'i Aleksandr Rimov tao amin'ny Instagram.
Aleksandr Rimov, mipetraka any Zelenograd, ekipa ao amin'ny Oblast ao Moskoa, 37 kilometatra avaratra andrefan'i Moskoa, no nikarakara ny famoriam-bahoaka tamin'ny 1 Jona mba hanohitra ny lalàna vaovao nolanian'ny parlemanta Rosiana izay mametra fatratra ny fahalalahana akademika sy ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena.
Nilaza tamin'ny MBK, sampam-baovao tsy miankina ilay mpikatroka fa mikasa hampiakatra ny raharaha momba ny onitra izy: “Rehefa nanomboka nilaza ny polisy fa mendrika amin'ny ” fahavetavetana an-tserasera “izany, dia nilaza aho fa tsy izaho no nanoratra izany fa olon-kafa”. Nangataka tamin'i Rimov ny polisy avy eo mba hanome ny angon-drakitra manokana momba ireo izay nisoratra anarana tamin'ny famoriam-bahoaka antserasera, rehefa nandà izy dia nilaza fa “hanara-maso sy hahazo ny fidirana amin'ny angon-drakitry ny mpandray anjara” ireo mpanao fanadihadiana na izany aza.
Mazàna ireo mpikatroka mandrindra ny hetsika ataon'izy ireo mba hanamarika ny toerana misy azy ireo amin'ny toerana manokana (oh: ny Kianja Mena any Moskoa) ary manampy fanehoan-kevitra amin'ireo hafatra fanoherana mampiasa ny songadina Resadresaka ao amin'ny Yandex.Maps sy Yandex.Navigator. Indraindray namboarina tamin'ny fomba iray ireo mari-pamantarana toerana ireo mba hamoronana teny na fehezanteny tokana (toy ny tamin'ny famoriam-bahoaka nataon'i Rimov navoakany tao amin'ny kaonty Instagram (fahatelo amin'ny carousel), izay mamoaka valin-teny mamoafady mampiseho ny ny hatezeran'ireo mpanao fihetsiketsehana amin'ny fifehezan'ny fanjakana ny sehatry ny fanabeazana).
Nahitana ny iray amin'ireo onja lehibe voalohany tamin'ny famoriam-bahoaka antserasera tao Rosia ny taona 2020. Nikarakara famoriam-bahoaka fanoherana tampoka tao amin'ny Yandex.Maps sy Yandex.Navigator ny mponina tamin'ny tanàn-dehibe maro hanehoany ny tsy fifalian'izy ireo amin'ny fameperana isan-karazany amin'ny fahasalamam-bahoaka nandritra ny areti-mandringana COVID-19. Mahatsikaiky fa “niparitaka” haingana ireo famoriam-bahoaka rehefa nanomboka namafa ny fanehoan-kevitr'ireo mpisera ny Yandex tany amin'ny toerana nisy ny “fivoriam-bahoaka faobe ankihihihy”.
Nanombola nanan-kery tamin'ny 1 Jiona 2021 ny fanovana tato ho ato tamin'ny lalàna Rosiana momba ny fanabeazana, izay notoherin'i Rimov sy ireo namany mpampiasa aterineto. Mandràra izay hetsika fanabeazana rehetra tsy ankatoavin'ny fanjakana sy ny fiarahamiasa amin'ireo oniversite na sampam-pianarana vahiny ireo fanitsiana ireo, lazaina fa hanoherana ny “fitaomana ratsy avy any ivelany eo amin'ny fizotran'ny fanabeazana” sy ny “fampielezan-kevitra miseho amin'ny fanabeazana” izany. Nanameloka ny fanovana noho izy midadasika loatra ny vondrom-piarahamonina akademika sy ireo manam-pahaizana hafa ary nampitandrina izy ireo fa mety hisy fiatraikany amin'ny fanakarana ny vahoaka izany, sady mandrahona ny hetsika fanabeazana tsy dia manara-penitra toy ny fampianarana an-tserasera, ny fampianarana amin'ny YouTube, ary na ireo podcast [rakipeo] aza.